Akụkọ - Na 2020, ụwa abanyela agha buru ibu megide COVID-19
Na 2020, ụwa abanyela ọgụ buru ibu megide COVID-19
Na 2020, ụwa abanyela ọgụ buru ibu megide COVID-19. Agha a dị ogologo karịa ka a tụrụ anya ya. N’ọnwa Ọktọba, BETTER bidoro disinfection ọhụrụ na hichapụ antibacterial.
Nke a F&U disposin disinfectant wipes nwere onyinye abụọ-yinye quaternary ammonium nnu disinfectant. Nke a na ụdị disinfectant nwere magburu onwe nwoke ịga ụlọ ọgwụ arụmọrụ. N'ime ha, e nwere quaternary ammonium nnu ọdịnaya nke 0.18-0.22.
Kedu ihe kpatara quaternary ammonium nnu ji nwee 0.18% -0.22%?
Ọdịnaya nke quaternary ammonium a nwere ike ọ bụghị naanị sterilaiz na disinfect, kamakwa enweghị iwe. Mgbe njupụta ahụ dị n’agbata 0.18% na 0.22%, ọ nwere ike mepụta mmetụta mgbochi mgbochi, na-eme ka uto nke nje na nje ghara igbochi ma nwụọ.
Karịsịa maka ọtụtụ bacteria dịka Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli, wdg, iji nkwụ "akwụkwọ" eme ihe ngwa ngwa igbochi nje na nje.
Site na ule site n'aka ndi otu nwere ikike, onodu ogwu ya ruru 99,9%.
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara na-ekwu na-akwọ aka ugboro ugboro, ọ dị mkpa ịrụ ọrụ dị mma nke disinfection na disinfection nke aka. N'ezie, ịsachasị mmiri pọmpụ agaghị asachapụ nje bacteria dị na aka.
Ọ bụ ezie na ihe ọ alcoholụ alcoholụ na-aba n'anya na-enwekwa mmetụta nke ịga ụlọ ọgwụ na disinfection, ọrụ na-ekwesịghị ekwesị nwere ike ịnwụ. Ihe ọ alcoholụ alcoholụ na-aba n’anya adịghịkwa mma na akpụkpọ ahụ anyị.
Site na nhichapụ disinfectant a nwere ike iji ya, hichaa aka gị n'oge ọ bụla, sterilaiz na disinfect, ma jụ ọrịa nje.
E nwekwara ụmụaka ndị na-akpa àgwà ọjọọ bụ́ ndị aka ha na-adịkarị ọcha. Ma jiri ya hichapụ sterilization na disinfection enweghị ike ịka mma, ihe a na-elekwasị anya dị oke nwayọ ma nwee mmekọrịta na anụ ahụ.
Nke a FU disinfectant na-ehichapụ bụ nke akwa dị elu na-enweghị akwa, nke na-eji nwayọ emetụ akpụkpọ ahụ n'enweghị mgbakasị ọ bụla ma ọ bụ nkasi obi.
Ihe ndị dị n'ime usoro a na-agbaso ụkpụrụ ojiji nke European Union, yana enwere nchekwa na ahụike.
Nhicha a mmiri nwere ọtụtụ ihe na-esi ísì ụtọ dị ka lemon, mkpụrụ vaịn, aloe, lavender na ihe ndị ọzọ. Anyị na-enyekwa ọrụ ọhụụ ahaziri ọhụrụ. Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị maka nkwado.